भारतीय रुपैया अब अनलाइनबाटै डाउनलोड ! - Nepali Virals
८ चैत्र २०७२, सोमबार १५:५७	486 पटक-पढिएको
रुपैया पैसा अनि अनलाइनबाटै डाउनलोड ! सुन्दै अचम्म लाग्ने है ? तर यो सत्य हो अब भारतीय नोट अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने भएको छ । त्यो पनि आम सर्वसाधारणले । तर कसरी अनि किन ? तलको फोटो हेर्नुस, केही देख्नु भयो ? नदेख्नु भएको भए तल पढ्नुस् ।
घुस लिने र दिने कार्य अत्यधिक बढेपछि भारतले भ्रष्ट्राचारबिरुद्द लड्न एउटा अनौठो कदम चालेको छ । भ्रस्टाचारबिरुद्द आवाज उठाईरहेको संस्था ‘फिफ्थ पिल्लर’ ले भ्रष्ट्राचार कम गर्ने उदेश्यले बजारमा ‘शुन्य’ रुपियाँको नोट निष्काशन गरेको छ ।
भारतीय ५० रुपयाँ जस्तै देखिने यो नोटमा0Rupee लेखिएको छ । ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ लेखिने ठाउँमा ‘भ्रष्टाचार खतम करो’ लेखिएको छ । कसैले घुस मागेको बेला उक्त शून्य मूल्यको नोट दिन सकिने र उसलाई तुरुन्त प्रकाउ गर्न सकिने नै यो नोटको बिशेषता भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
हालसम्म यस्तो शून्य मूल्यको २५ लाख थान नोट वितरण गरिसकिएको छ । ताकी कसैले घुस मागे त्यस्तो नोट दिन सकियोस् र तुरुन्त प्रहरीले पक्राउ गर्न सकोस् । यो नोट संस्थाको वेवसाइटबाट सजिलै डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ ।
यो नोट हिन्दी, तमिल, मलयालम, कन्नड र तेलगु गरी ५ भाषामा तयार गरिएको छ । हालसम्म यही नोटको सहयोगले भारतमा हजारौं भ्रष्टाचारीहरु पक्राउ परिसकेका छन् । नोटमा संस्थाको नाम र फोन नम्बर समेत छ ।
गर्मीमा ध्यान दिनै पर्ने ७ कुरा
अघिल्लो गर्मीमा ध्यान दिनै पर्ने ७ कुरा
पछिल्लो कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंगसँग होली खेल्ने ?